R/wasaare Saacid oo diiday in Farax Cabdiqaadir laga dhigo wasiir iyo Madaxweyne Xasan Sheikh oo ka xumaaday.(Xog-Rasmi ah oo Lasooo Helay) | Xisbiga Xuriyada (The People Of Freedom)
R/wasaare Saacid oo diiday in Farax Cabdiqaadir laga dhigo wasiir iyo Madaxweyne Xasan Sheikh oo ka xumaaday.(Xog-Rasmi ah oo Lasooo Helay)
Raisulwasaaraha Somalia Dr Abdi Farax Shirdoon ayaa waxaa uu golahahiisa Wasiirada kasaraay Farax Cabdiqadir oo ka mid ahaa Xisbiga nabada ee uu hogaamiyo Madaxweyne Xasan Sheikh. Sida dad badani la socdeen xulista golaha wasiirada ayaa waxaay qadatay waqtigi ugu dheera ee lagu soo xulo gole wasiiro oo ay yeelato Somalia. Dib u dhaca ku imanayay markasta Magacaabida golaha wasiirada ayaa waxaa uu sabab ahaa kala fikir duwanansho dhextalay Madaxweynaha iyo R/wasaaraha Somalia.
Waxyaabaha ugu badan ee labadaasi Masuul ay isku haysteen ayaa waxaay ahayeen 3 qodob oo si weyn logu kala fogaa waxaayna kala ahayeen sidan.
1-Madaxweynaha oo rabay in Wasiirka waxbarashada laga dhigo saaxibkiisa qaliga ah Farax Cabdiqadir Farax Sakiin iyo R/wasaaraha oo la soo marsiin wayay in uu Wasiirada ku dar Farax Cabdiqaadir.
2 Qabiilka la siinaayo mid ka mid ah Labada Wasiir ee ay heshay beesha hawiye Madaxweynaha ayaa qabay in la siiyo Beesha Xawaadle halka R/wasaaraha uu qabay in la siiyo beesha Murursade.
3 Madaxweynaha oo qabay in golaha Wasiirada lo qaybsado Xisbiga Rajo Forum ee u hogaanka u yahay R/wasaare Saciid iyo Xisbiga Nabada ee uu hogaanka u yahay Madaxweyne Xasan Sheikh iyo R/wasaare Saacid oo arinkaas ka soo horjeeday.
Sadexdaas qodob ayaa ugu muhiimsana waxyabaha markasta dib u dhigayay so magacaabida golaha wasiirada cusub ee Somalia .
Dood dheer iyo falanqayn mudo qadatay waxay labada masuul isla garteen in qof kasta meeshisi ka soo dago oo islamarkan meel dhexe la iskugu yimaado.
Madaxweyne Xasan ayaa waxaa qasab ku noqotay in uu ka tago Saxiibkis qaliga aha ee Farax Cabdiqadir waxana uu siistay Abtigiis oo ka soo jeeda beesha Xawaadle in lagu daro golaha wasiirada.
R/wasaare Saacid ayaa asagan ku qasbanaday in uu ka soo fuuqo beeshi uu la rabay in ay noqoto Wasiirka labaad ee ay beesha hawiye heshay waxana uu ogoladay in beesha Xawaadle la siiyo Wasiirki la isku haystay mar hadi Madaxweyne Xasan Sheikh uu ka tagay Saxiibkiisa qali ah.
Dhanka kale R/wasaare Saacid ayaa waxaa uu ku adkaystay in Golaha Wasiirada ay qaybsadaan:
1 -Xisbiga Nabada
2 -Xisbiga Tayo
3- Xisbiga Rajo Forum.
Madaxweyne Xasan Sheikh ayaa waxa uu aqbalay in golaha wasiirada lo qaybsaday 3 xisbi waxa hadana dood badan ka dhalatay qaabka 3 xisbi ay u qaybsanayaan 10 ka Wasiiir dood dheer ka dib waxaa la isla gartay in 4 Wasiir la siiyo Xisbiga Rajo Forum 4 Wasiirna la siiyo Xisbiga Nabad 2 Wasiirna la siiyo Xisbiga Tayo oo lagu tala galay in lagu qanciyo Shacabka Somaliyeed oo aad u taagera Xisbigaas.
Qaabkan marki lo qaybsaday ayaa waxaa R/wasaaraha uu shurud ka dhigay in Madaxweynaha usan faraha la soo galidoonin Wasiir kuxigeenada Wasiiru dowleyaasha iyo iyo Wakaalado Awooda badan oo la magacaabi doono dhawan Madaxweyne Xasan Sheikh ayaa waxaa uu balan qaday in usan ku farogalin doonin qaybaha dhimaan ee Xukumada R.wasaare Saacid.
R/wasaare Abdi Farah Shirdoon ayaa intaan la magacaabin ka hor waxaa uu balanqaaday in uu Madaxweynaha qayb lixaad leh ka siin doono Xukumada u soo dhisayo balse marki la magacaabay ayaa waxa uu la soo baxay miciyo dhaadher waxaana uu in badan ka dulbooday balanqaadyadi horay uu ula galay Madaxweyne Xasan Sheikh.
Xubno ku sugaan Villa Somalia ayaa waxaay ino shegeen in Madaxweyne Xasan Sheikh uu ku kaadsoomay Magacaabisti Xilka R/wasaaraha uu u magacaabay Cabdi Farax Shirdoon waxaayna shegeen in Dr.Saacid uu ka ad adag yahay sida in badan oo Somali ah ay u malaynayaan.
Shirdoon ayaa hada waxaa uu Madaxweyne Xasan Sheikh uga dheereyay Xiriirka Wamada Dariska ah iyo waliba Calamka waxaana la aminsan yahay in Dr Saacid u kaliyah sugaayo in Barlamanka Somalia ay kalsoonida siyaan golaha cusub ee Wasiirada.
Wax yaabaha Xusida mudan ayaa waxaa ugu weyn in Amar ka soo baxay Xubnaha beesha Calamka kaas oo ahaa in golaha wasiirada laga dhigo 9 Wasiir Madaxweyne Xasan sheikh na uu ogoladay uu R.wasaare Saacid jabiyay waxaa taasi ka sii daraan in qodob ka mid ah Dastuurka Somalia u Dr. Saacid si toos ah uga tilaabsaday marki uu jabiyay qodobka qaylada badan dhaliyay ee 4.5
Dr. Saacid ayaa waxa uu shegay in beesha shanaad ay aqoon ahaan iyo ilbaxnimo ahaanba ay ka horeyso beelaha 4ta ah ee qaata inta badan saami qaybisiga siyaasada Somalia waxaana uu shegay in manta wixi ka danbeya beelaha somaliyeed ay isku xaquuq noqonayaan.
Madaxweynaha Xasan sheikh ayaa arinkaasi si taxadar leh u soo dhaweyay waxaana uu shegay in arinkaasi yahay mid meesha ku jira lakiin ku xadgudubka dastuurkana uu yahay danbi laga galayo wadanka,
Xogtaan oo aan in badan soo aruurinay isla markana aan la kaashanay howlwadeeno ka kala tirsan Xafisyada Madaxweynaha iyo R/wasaaraha ayaa waxaay walaac ka muujinaysa wadashaqaynta dhexmari karta Madaxweyne Xasan Sheikh iyo R.wasaare Saaciid oo ah nin mowqiif adag islamarkana aan jeclayn in la soo faragaliyo arimaha Xafiiskisa.
Arinta kale ee la yaabka leh ayaa waxaay tahay R.wasaare Saacid waxaa uu si toos ah u diiday in uu qaabilo wufuud isdaba joog ahayd oo dhawaanahan ku soo qulqulayay Magaalada muqdisho waxana uu shegay in usan u hayn waqti uu kula kulmo balse xaqiiqda ayaa waxay tahay in uu Saacid sugaayo inta Barlamanka Somalia ka ansixinaayo Xukumada u soo magacaabay ka dib na uu howlahiisa bilaabo asago leh awood u kaga hortago farogalin kasta oo xafiskiisa lagu sameeyo.
Mid ka mid ah dadka aadka ugu dhow Xafiiska R.wasaare Saacid ayaa waxaa uu ino shegay in Dr.Saacid u sugaayo in mar un la ansixiyo golaha wasiirada ee uu soo magacabay ka dib na lo tagi doono wajiga rasmiga ah ee R.wasaare Saacid.
Madaxweyne Xasan Sheikh ayaa dhankiisa u muqda Shaqsi qabweyn oo isi siiyay Awooda aan Dastuurka cusub ee Somalia ku qornayn dastuurka cusub ayaa waxaa uu awooda siinaya R.wasaaraha wana meesha labada masuul ay isku qaban doonan .
Dhanka kale Madaxweynaha iyo R.wasaaraha ayaa si weyn ugu kala fog arimaha ku sabsan Maamul usameynta Jubboyinka iyo Gedo dooda badan oo arinkaas ku sabsan oo ay wada yeesheen Madaxweynaha iyo R.wasaaraha ayaa lagu kala boday balse wali ma cada qodobka rasmiga ah ee ay isku fahmi wayeen labada masuul .
Ugu danbeyn dad badan ayaa waxaay qaban in Madaxweyne Xasan Sheikh uu ku dag dagay magacaabida uu R.wasaare Saacid u magacaabay xilka Wasiirka kowaad ee Somalia waxana lagu macnaynaya in Saacid u yahay shaqsi ad adag oo aan la jaan qaadi karin Madaxweyne Xasan Sheikh.
Taariikhda Liiska golaha Wasiiradda cusub iyo qabiiladooda Tartanka Masaakiinta Iyo Maalqabeenada